Oman: Eid tao amin’ny Twitter · Global Voices teny Malagasy
Oman: Eid tao amin'ny Twitter
Voadika ny 19 Jona 2018 3:13 GMT
(Marihina fa tamin'ny 22 Septambra 2009 no nanoratana ny lahatsoratra teny Anglisy)
(Sary natolotr'i alucard187)
Nankalaza ny andro voalohany ho an'ny Eid al Fitr i Oman ny volana faha 21 Septambra 2009, andro iray taorian'ny nankalazan'ny ankamaroan'ny fanjakana Golfa mpifanolo-bodirindrina aminy izany. Natao aorian'ny tsinam-bolana ny fankalazana, izay mamarana ny Ramadany – ilay volana ho an'ny fifadian-kanina, saingy tsy ny firenena rehetra, na ny antokom-pivavahana rehetra, no miaraka mankalaza izany.
Noheverina fa hanakatsakana ny fankalazana ny Eid ihany koa ny fipoahan'ny gripan-kisoa tao amin'ny Sultana. Nanao fanentanana tamin'ny fahitalavitra sy ny gazety ny governemanta mba handrisihana ny olona handray fepetra ho fisorohana izany- toy ny tsy fampiarahabana, ny fifanorohana, eny fa na dia ny kopa-tanana fotsiny aza nandritra ity fankalazana ity. Nanome baiko ireo ben'ny tanàn-dehibe ihany koa ny Ministeran'ny Raharaham-bahiny mba tsy hanao fankalazana ny Eid ho an'ny daholobe. Tsy toy ny fankalazana ny ankamaroan'ny Eids rehetra ny andro voalohany nanaovana izany satria tsy nandefa ny Sultan Qaboos bin Saeed nanatrika ny vavaka Eid ny Oman TV.
Na dia izany aza, toa tsy nanakana ny hafalian'ny olona izay nankalaza ny andro voalohan'ny Eid ny tahotra ny gripan-kisoa . Raha tokony ho maro ireo toerana ivavahan'ny besinimaro dia tany amin'ny moskea mahazatra no nanaovan'ny sasany ny vavaka Eid maraina izay nahitana olona vitsy kokoa noho ireo toerana lehibe .
Nohavaozina nandritra ny andro voalohan'ny Eid ny sioka Omani. Nisioka i Omanizer_muscat fa na dia nandefa ireo hafatra rehetra momba ny fanentanana aza ny OmanTV, dia ity no Eid izay nahazoany oroka betsaka indrindra hatramin'izay!
Toa nivoaka sy nifanerasera tamin'olona tsy nisy tahotra ny gripa ny ankamaroan'ny olona araka ny sioka nalefan'i i Alucard187 ny alin'ny andro voalohan'ny Eid fa toa feno tanteraka ireo latabatra rehetra tany amin'ny trano fisakafoanana tao an-drenivohitra Muscat. Nisioka ihany koa i Otheroman fa nahazo olona an'arivony ny Souq nentim-paharazana ao Matrah izay nihantona manodidina ny sisin-dalana.
Nanohy ny fanavaozam-baovao niaraka tamin'ny fanamarihana mahatsikaiky izay reny nandritra ny Eid i Makorani. Navoakan'i Fatmanoor ny sarin'ny sakafo Eid misy hena Omani nentim-paharazana “Shiwa” izay nataony tany an-trano, raha i alucard187 kosa nampiseho anay ny sarin'ilay zavatra izay noloarana avy any anaty tany ary tsy nofonosina fa efa vonona hohanina avy hatrany Mandray anjara amin'ny fikarakarana ny Shiwa izay ahitana omby iray manontolo na osy iray natono nandritra ny telo andro tao anaty lafaoro manokana izay voaomana ao anaty lavaka anaty tany ny tanàna iray manontolo.
Ankalazaina mandritra ny telo andro aorian'ny faran'ny volan'ny Ramadany ny Eid al Fitr ao Oman.
15 ora izayMaraoka